Japana: Ireo Labozia Ranomandry Mamelom-panantenana Ho An’i Haiti · Global Voices teny Malagasy
Japana: Ireo Labozia Ranomandry Mamelom-panantenana Ho An'i Haiti
Voadika ny 31 Marsa 2018 9:19 GMT
Vakio amin'ny teny русский, 繁體中文, 简体中文, Français, বাংলা, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 9 Febroary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nandritra ny ririnina nangatsiaka tao amin'ny Oniversite Iraisam-pirenena Japoney (IUJ) , any amin'ny prefektioran'i Niigata any Japana, mpianatra maherin'ny 100 avy amin'ny firenena samihafa no niara-nanangana baolina ranomandry mba handrehetana ny jiron'ny fanantenana ho an'ireo Haitiana izay nijaly noho ny faharavana nateraky ny horohorontany ny 12 Janoary 2010.
Ny hetsika jiron-dranomandry izay nokarakarain'ny Zaikaben'ny Fiahiana Manerantany ao amin'ny IUJ sy ny Klioban'ny Saripika no faratampon'ny ezaka fanangonam-bola mitentina 100.000 YEN (1000 dolara amerikana) mba ho fandraisana anjara amin'ny hetsika ataon'ny Vokovoko Mena ao Japana ho fanampiana an'i Haiti.
Nasaina nanangana trano kely miendrika igloo iray amin'ny alalan'ny fampiasana baolina ranomandry ireo mpianatra rehetra izay nisolotena ny fireneny avy tao amin'ny IUJ ary nandrehitra ireo labozia ilaina mba hanazavana izany amin'ny endrika soratra hoe “HAITI”. Na dia teo aza ny hatsiaka 0 ka hatramin'ny 1 degre, dia niara-nientana ireo mpianatra mba hananganana ny baolina ranomandry mba ho hita miaraka amin'ny fotoana filentehan'ny masoandro ireo jiro labozia izay fotoana heverina fa tonga lafatra ho an'ny vavaka mangina.
Mampiseho ny hetsika Jiron-dranomandry miaraka amin'ireo hafatra avy amin'ireo mpianatra misolonteana ny firenena samihafa ny lahatsary etsy ambany . Ny hafatra iraisan'ireo mpianatra tao amin'ny IUJ dia ny hoe: “Tsy irery ianareo vahoaka Haitiana, mivavaka sy manohana anareo izao tontolo izao!”
avy amin'i Jusminesophia
Tena nahafinaritra fa naneho ny fiarahany miory lalina tamin'i Haiti ireo mpianatra avy amin'ireo firenena maromaro, anisan'izany i Myanmar, Indonezia, Filipina ary Shina satria efa niaina ihany koa ny faharavana lehibe noho ny loza voajanahary tato anatin'ny taona vitsivitsy ireo firenena ireo. Tena mampihetsi-po tokoa sady mazava tsara ny hafatr'izy ireo ho an'ireo niharam-boina Haitiana : “Nandritra ny krizy, nahazo fanampiana avy amin'izao tontolo izao ny firenenay, adidinay indray izao ny manampy anareo.”
Tamin'ny fiafaran'ilay hetsika, nifampitantana ireo mpianatra ary nihodidina ny Jiron-dranomandry Haiti mba hanehoana ny firaisankina iraisam-pirenena ho an'ny antony iraisana dia ny hoe: Aza manary an'i Haiti!
Ny Baolina Ranomandry nandritra ny filentehan'ny masoandro
Firaisankina ho an'i HAITI